Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Mitohy miakatra ny isan'ny mpandeha ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny fifamoivoizana manerana ny seranam-piaramanidin'ny Fraport Group dia nitombo be, ary ny isan'ny taona isan-taona dia nitombo an-jatony isan-jato - na dia niorina tamin'ny fihenan'ny fifamoivoizana aza tamin'ny Jolay 2020.
Mitohy ny fironana tsara Fraport.
FRA dia nandray ny mpandeha 2.85 tapitrisa tamin'ny Jolay 2021.
Raha ampitahaina tamin'ny Jolay 2020, ny isan'ireo mpandeha dia miakatra mitovy amin'ny 115.8 isan-jato.
Ny fandefasana entana ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt dia mahita fitomboana matanjaka kokoa, ny seranam-piaramanidina Fraport Group maneran-tany koa dia mitazona fironana miakatra
Isa ny mpandeha amin'ny Seranam-piaramanidina Frankfurt (FRA) nitohy nitombo tamin'ny Jolay 2021. Ny FRA dia nandray mpandeha 2.85 tapitrisa teo ho eo tamin'ny volana nitaterana, izay maneho ny habetsahan'ny mpandeha isam-bolana avo indrindra hatramin'ny nipoahan'ny areti-mandringana Covid-19. Raha ampitahaina tamin'ny Jolay 2020, dia nitombo 115.8 isan-jato izany. Na izany aza, ity tarehimarika ity dia mifototra amin'ny sanda benchmark ambany voarakitra tamin'ny Jolay 2020, raha nihena ny fifamoivoizana tao anatin'ny fiakaran'ny tahan'ny aretina coronavirus.
Tamin'ny volana nitaterana, ny tahan'ny tranga ambany COVID-19 sy ny fiakaran'ny tahan'ny vaksiny dia nisy fiatraikany tsara tamin'ny fangatahana - indrindra ho an'ireo toerana fialantsasatra nentim-paharazana. Tamin'ny andro faratampony dia nahatratra ny 60 isan-jaton'ny ambaratonga talohan'ny fivalanana ny isan'ny mpandeha tao Frankfurt. Ny andro be olona indrindra tamin'ny volana nitaterana dia ny 31 Jolay, raha mpandeha 126,000 teo ho eo no nandehandeha namakivaky ny seranam-piaramanidina Frankfurt - ny isan'ny mpandeha betsaka indrindra voarakitra tao anatin'ny iray andro hatramin'ny nivoahan'ny areti-mandringana.
Raha ampitahaina tamin'ny Jolay 2019, ny fifamoivoizana mpandeha ao amin'ny FRA dia mbola nanoratra fihenam-bidy 58.9 isan-jato ho an'ny volana mitatitra. Nandritra ny volana Janoary-hatramin'ny-Jolay 2021, nandray tsara mpandeha 9.3 tapitrisa ny seranam-piaramanidina Frankfurt. Raha ampitahaina amin'ny vanim-potoana fito volana ihany amin'ny 2020 sy 2019, dia mampiseho fihenan'ny 30.8 isan-jato sy 77.0 isan-jato izany.
Ny fivezivezena amin'ny entana any Frankfurt dia nanohy nitombo ny fitomboany, na eo aza ny tsy fahampian'ny fahaiza-manaon'ny kibo nomen'ny fiaramanidina mpandeha. Tamin'ny volana jolay 2021, ny fampitam-bokan'ny FRA (misy ny zotram-piaramanidina sy ny fiaramanidina) dia nitsambikina 30.0 isan-jato isan-taona hatramin'ny 196,223 metric taonina. Raha oharina tamin'ny Jolay 2019, ny entana dia 9.8 isan-jato. Ny hetsiky ny fiaramanidina dia nisondrotra 79.5 isan-jato isan-taona ka 27,591 no niainga sy niantsona. Ny lanjan'ny fihenam-bidy farany ambony (MTOWs) dia nitombo 68.5 isan-jato ka latsaky ny 1.7 tapitrisa metric taonina tamin'ny Jolay 2021.